သေဆုံးသူကျန်ရစ်ခဲ့သည့်ပစ္စည်းကို မည်သို့အစီအစဉ်ဖြင့် အမွေခံထိုက်ခွင့်ရှိသလဲ ? - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
သေဆုံးသူကျန်ရစ်ခဲ့သည့်ပစ္စည်းကို မည်သို့အစီအစဉ်ဖြင့် အမွေခံထိုက်ခွင့်ရှိသလဲ ?
14 Feb 2020 1:03 pm တြင္ တင္ခဲ့သည္
735 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
သေဆုံးသူကျန်ရစ်ခဲ့သည့်ပစ္စည်းကို အောက်ပါအတိုင်း အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိပါသည်။
(၇) တူ၊ တူမများ
(၈) ဦးကြီး၊ ဦးလေး အစရှိသူများ
(၉) တူ၊ တူမများ၏ သားသမီးများ
(၁၁) တူ၊ တူမများ၏ မြေးများ
(၁၂) တစ်ဝမ်းကွဲညီအစ်ကိုမောင်နှစ်များ၏ သားသမီးများ
(၁၃) တစ်ဝမ်းကွဲညီအစ်ကိုမောင်နှစ်များ၏ မြေးများ
အမှတ်စဉ် (၁)၊ (၂)၊ (၃) တို့သည် အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ကို တိုက်ရိုက်ချုပ် ဆိုနိုင်ပြီး ကျန်အမွေခံများမှာ အမွေဆက်ခံရေးလမ်းကြောင်းအရလည်းကောင်း၊ တရားစီရင်ရေးနည်းလမ်းအရ လည်းကောင်း၊ တရားရုံးအမိန့်ဒီကရီဖြင့် အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ချုပ်ဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များသည် တရားစီရင်ရေးနည်းလမ်းအရ အမွေဆက်ခံခွင့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
iMyanmarHouse.com ၏ ဥပဒေအကြံပေး ပညာရှင်အဖွဲ့ မှ အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။ Credit: iMyanmarHouse.com
ေသဆုံးသူက်န္ရစ္ခဲ့သည့္ပစၥည္းကို မည္သို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ အေမြခံထိုက္ခြင့္ရွိသလဲ ?
ေသဆုံးသူက်န္ရစ္ခဲ့သည့္ပစၥည္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိပါသည္။
(၇) တူ၊ တူမမ်ား
(၈) ဦးႀကီး၊ ဦးေလး အစရွိသူမ်ား
(၉) တူ၊ တူမမ်ား၏ သားသမီးမ်ား
(၁၁) တူ၊ တူမမ်ား၏ ေျမးမ်ား
(၁၂) တစ္ဝမ္းကြဲညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မ်ား၏ သားသမီးမ်ား
(၁၃) တစ္ဝမ္းကြဲညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မ်ား၏ ေျမးမ်ား
အမွတ္စဥ္ (၁)၊ (၂)၊ (၃) တို႔သည္ အေမြဆက္ခံပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းမွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ ဆိုႏိုင္ၿပီး က်န္အေမြခံမ်ားမွာ အေမြဆက္ခံေရးလမ္းေၾကာင္းအရလည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းအရ လည္းေကာင္း၊ တရား႐ုံးအမိန႔္ဒီကရီျဖင့္ အေမြဆက္ခံပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အစၥလာမ္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းအရ အေမြဆက္ခံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
iMyanmarHouse.com ၏ ဥပေဒအႀကံေပး ပညာရွင္အဖြဲ႕ မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။ Credit: iMyanmarHouse.com
အေမြ ဗဟုသုတ သိမွတ္ဖြယ္ရာ
အာလူးကို အသုံးပြုပြီး လွယ်ကူစွာ နှင်းဆီပန်းပင်စိုက်ပျိုးနည်းလျှို့ဝှက်ချက်
အမျိုးသမီးများကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ဥပဒေများ
ကိုက်လန် ၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
COVID အတွင်း ချွေတာရေး (၁၀ ) ချက်
န်ိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်ထပ်ထားသော မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အမျိုးသမီး၏ အမည်ပေါက်အဆောက်အအုံကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်...
အိမ်ထောင်ကြီးသားသမီးများနှင့် ဆက်နွယ်သည့် အိမ် နှင့် မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
ရုံးပတီသီးစားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
ေပအက်ယ္ (14x54) တိုက္ခန္း
13*54*ပေ သစ္စာလမ်းမအနီး ပြင်ဆင်ပြီး
0.38 သိန္း (က်ပ္)
မြရည်နန္ဒာ တိုက်ခန်း မြေညီအထပ် အငှား ၂သိန်း